Imibuzo evame ukubuzwa | Ikusasa Valve Ball Co., Ltd.
Ingabe inkampani yokuhweba noma umkhiqizi?
Singumkhiqizi wezingxenye zebhola le-ball futhi sithumela kwamanye amazwe, sinefektri yethu ese-Oubei, eWenzhou City, lapho idume khona ngomkhakha wayo we-valve & pump.
Yini imikhiqizo yakho eyinhloko?
Sigxila ekukhiqizeni izingxenye zebhola le-valve, ikakhulukazi amabhola e-valve, sinolwazi olungaphezu kweminyaka eyishumi kuwo.
Wenza kanjani ikhotheshini?
Ngokuvamile, sinikeza insizakalo eyenziwe ngezifiso, ngakho-ke senza ikhotheshini ngokuya ngemidwebo yamakhasimende, uhlobo lwesisindo sesisindo sokumboza impahla kanye nezindleko zabasebenzi kuzocatshangelwa.
Kumakhasimende angenayo imidwebo yawo, uma evuma, singasebenzisa imidwebo yethu.
Kuya ngento yakho e-odiwe kanye nobungako bakho.
Ngokuvamile, singaqeda imikhiqizo ngobuningi kungakapheli izinsuku eziyi-15 ngokumelene kokuthola inkokhelo phansi.
Iyini indlela yokuthumela?
Sizonikeza isiphakamiso esihle sokuthumela izimpahla ngokosayizi we-oda nekheli lokulethwa. Nge-oda elincane, Sizophakamisa ukuthi ulithumele nge-DHL, i-TNT noma enye i-express eshibhile endlini ngendlu ukuze ukwazi ukuthola imikhiqizo ngokushesha nokuphepha. Nge-oda elikhulu, singalithumela olwandle, ngendiza, noma ukuthumela impahla ngokuya ngezicelo zamakhasimende.
Ungaqinisekisa kanjani ukuhlolwa kwekhwalithi?
Ngesikhathi senqubo yoku-oda, sinesilinganiso sokuhlola ngaphambi kokulethwa. Ngaphambi kokupakisha, sineqembu elilawula ikhwalithi ukuhlola umkhiqizo ngamunye ukuqinisekisa ukuthi ngamunye wawo usekhwalithi ephelele, futhi sizohlinzeka ngezithombe zangempela ezicacile zemikhiqizo eqediwe ngobuningi kwiklayenti lethu ngalinye.
Ungakwazi yini ukwamukela i-OEM noma i-ODM?
Yebo kunjalo. Noma iyiphi i-logo noma ukwakheka kwamukelekile.
Ngabe awukayitholi impendulo?
Sicela usithumele i-imeyili (info@future-ballvalve.com) ngokukhululekile sizozama konke okusemandleni ethu ukukusiza nokuxazulula izinkinga.